Richarlison Oo Madaxii Ronaldo Samaystay Ka Hor Kaddib Saddexlaydii » Axadle Wararka Maanta
Brazil ayaa u dagaallamaysa in ay markii labaad oo xidhiidh ah ku guuleysato tartanka ciyaaraha Olombikada Adduunka oo ciyaartii ugu horreysay ay ku furteen guul 4-2 ah oo ay ka gaadheen xulka awoodda badan ee Germany.
Xiddiga hormoodka u ah Brazil waa weeraryahanka Everton ee Richarlison oo saddexlay dhaliyey ciyaartiisii hore, isagoo galay taariikhda Premier League oo uu noqday ciyaaartoygii ugu horreeyey ee Premier League ka ciyaara ee saddexlay ka ciyaaraha olombikada.
Soddon daqiiqadood oo kaliya ayuu ku samaystay taariikhdan, waxaana uu hadda bixinayaa ishaaro ah in ay ku jirto ruuxdii Ronaldo Nazario oo kale.
Ka hor ciyaarta Ivory Coast ee Axadda, Richarlison ayaa beddelay muuqaalkiisa duleed, waxaana uu u xiirtay sidii Ronaldo oo uu timaha u jartay sannadkii 2002, markaas oo isagoo dhaawac kasoo kacay uu dalkiisa Brazil u qaaday Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Korea iyo Japan.
Garoonka International Stadium ee magaalada Yokohama ee waddanka Japan ayaa lagu qabtay finalkii 2002 laakiin hadda dhamaan ciyaaruhu waxay ka dhacayaan Tokyo, balse waxay wadaagaan magaca waddanka ee ah Japan.
Brazil ayay isku hormo ku jiraan Jarmalka oo ay hore usoo karbaasheen, Ivory Coast oo ay Axadda la ciyaarayaan iyo Sucuudiga oo ay dhamaadka usbuucan kusoo xidhan doonaan Group C oo ay ku wada jiraan.
Xilli 19 sannadood kasoo wareegeen guushii Brazil ee Koobkii Adduunka 2002 iyo muuqaalkii Ronaldo Nazario, waxa riyo guul ah dalka Japan uga soo istaadhay Richarlison oo muuqaalka Ronaldo samaystay.
Hore ayuu sidan oo kale ugu xiirtay sannadkii hore, laakiin hadda waxa uu u ciyaarayaa waddankiisa oo uu dhowaanna kala qayb-galay tartanka qaramada Latin America ee Copa America oo ay finalkii Argentina kaga guuleysatay.
Si kastaba, Richarlison oo 24 jir ah ayaa xulka qaranka Brazil u saftay 32 ciyaarood oo uu u dhaliyey 10 gool, waxaanu u dagaallamayaa in uu koobkiisii ugu horreeyey la qaado.